Apôstôly amin'ny andro farany - Countdown to the Kingdom
Nosoratan'i Peter Bannister, MTh, MPhil
FR MICHEL RODRIGUE SY NY "APOSTOLY ANDRO FARANY"
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia te-hanandrana hanome fanazavana vitsivitsy aho ary antenaiko mba hampihena ny maripana mikasika ilay resabe mitohy manodidina an'i Fr Michel Rodrigue sy ireo fanambarana nambarany. Hifantoka manokana amin'ny teny manokana izay toa niteraka korontana be aho, ary ny eveka kanadianina roa, Mgr Gilles Lemay http://www.diocese-amos.org/sn_uploads/fck/FABL/2020-09-03-Open-letter-from-Bishop Gilles-Lemay-about-Father-Michel-Rodrigue.pdf ary Bp Robert Bourgon http://hearstdiocese.com/diocese/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-9-Letter-to-the faithful-from-Bishop-Bourgon.pdf, vao haingana no nanohitra ny fanontana an-tsoratra, farafaharatsiny satria izy io dia nampiasaina tamin'ny hafatra heverina fa natolotr'i Fr Rodrigue. Io ilay fitenenana hoe "apôstôly amin'ny andro farany" izay, ho an'ireo tsy mahalala ny literatiora mystika katolika, dia mety hamely ny mpamaky sasany ho manana endrika ambony, manaitra ny saina na "an'arivony" mihitsy aza. Ilay teny dia azo antoka fa miaraka amin'ny fanamafisam-peo azo antoka eschatolojika izay mety hahatonga ny mpamaky sasany - sy ny mpiangona sasany - ho sahiran-tsaina, saingy ny fahitako azy fa raha adika araka ny fomba nentin-drazana mystika ankatoavina, ireo teny hoe "apôstôly amin'ny andro farany ”Raiso ny firaisan-tsaina eo amin'ny lafiny foto-kevitra sy ny firaisan-tsaina teolojika izay tokony hamerina ny fahatahorana ny hafatra manandanja nataon'i Fr Michel. Raha nilaza an'io dia tokony hamafisina ihany fa tsy misy amin'ireto manaraka ireto manaporofo fa misy aingam-panahy tsy takatry ny saina ao ambadiky ny fanambarana nataony, izay fanontaniana misaraka tsy azo valiana mazava eto.
"NY APOSTOLY NY ANDRO FARANY ”?
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny sasany, amin'ny fampiharana ny teny hoe "apôstôly amin'ny andro farany", Fr Michel Rodrigue dia tsy tokony ho raisina ho toy ny fiavonavonana karazana toe-javatra manokana na voninahitra ho azy, ary mbola kely kokoa aza raha toa ka misy famakiana ny exclusivity hamakiana azy. ampiasaina. Raha ny fahalalako azy, ny fotoana tokana niresahan'ny pretra kanadiana ny tenany hoe "ny apôstôly amin'ny andro farany ”(mba hitanisa ny taratasin'i Eveka Bourgon, izay toa miampanga an'i Fr Michel ho fampiroboroboana tena tamin'io fotoana io) dia rehefa namariparitra ny fampiasam-bolany ho lohan'ny Fraternité Apostolique St Benoit-Joseph Labre. Nandritra ny lanonana dia nilaza i Fr Rodrigue fa naheno ny Virjiny nilaza hoe "Antsoiko ho apôstôly amin'ny andro farany". Na inona na inona fiorenan'ny filazalazana mifototra amin'ny fifandraisana mistika marina, dia tsy voatery ho olana amin'ny teny manodidina io teny io. Azo adika amin'ny fomba ara-drariny fa tsy misy afa-tsy ny fanondroana andraikitra apôstôlika iray manokana eo amin'ny vondron'olona vitsy an'olona ary ny amin'ny anjara asa amin'ny fitarihana (toy ny hoe, raha misy olona maromaro ao anatin'izany ny mpikambana iray ao amin'ny klerjy. , nisy nilaza hoe "Miantso ny mompera aho"). Ny tena zava-dehibe kokoa angamba dia ny fahatsapana mazava fa mipoitra avy amin'ny famafana ny fampianaran'i Fr Rodrigue, izay mifanohitra amin'ny fanamarihana mitokana, dia ireo apôstôly amin'ny andro farany dia vondron'olona mpino, fidirana an-kianja mipoitra ao anatin'ny Fiangonana. Ohatra, nisy hafatra tamin'ny 3 Janoary 2019 nilaza fa nampitain'ny Arkanjely Michael taminy ny teny hoe "mivavaka miaraka amin'ny Renin'Andriamanitra isika ho an'ny apostoly [plural] amin'ny andro farany hitsangana. ”
NY ASA FOTOTRA NY "APOSTOLY AMIN'NY FARANY" SY NY FOMBA AZY AMIN'NY TRADISY MISTERIKA KATOLIKA
ST LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT, MELANIE CALVAT ARY ST HANNIBAL DI FRANCIA
Ho an'ireo tsy zatra ilay teny hoe "apôstôly amin'ny andro farany [na andro farany]" (apôtres des derniers temps) dia avy amin'ny Fitsaboana ny tena fanoloran-tena ho an'ny Virjiny Masina avy amin'ny evanjelista Breton St Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), izay ny eritreriny dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fanekena ny Papa St John Paul II, izay naseho tamin'ny alalàn'ny teny filamatra apôstôlika Totus tuus: "Anao daholo aho, ary izay ananako rehetra dia anao, ry Jesosy be fitiavana indrindra, tamin'ny alalàn'i Maria, ny Reninao masina indrindra" (bokiny mitondra ny lohateny n ° 233). Ny famaritan'i St Louis-Marie ny apôstôly tamin'ny andro farany, nipoitra tamin'ny vanim-potoana talohan'ny Fiavian'ny Tompo Fanindroany, izay hanomezana voninahitra ny anjara asan'i Maria amin'ny tantaram-panavotana dia mbola iray amin'ireo andalan-teny malaza indrindra ao aminy:
Izy ireo dia ho minisiteran'ny Tompo izay, toy ny afo mirehitra, izay hampirehitra na aiza na aiza ny afon'ny fitiavan'Andriamanitra. Ho tonga eo an-tanan'i Maria mahery izy ireo, toy ny zana-tsipika maranitra, izay hamerenany ny fahavalony. Izy ireo dia ho tonga tahaka ny zanakalahin'i Levy, diovina amin'ny afon'ny fahoriana lehibe ary mifanakaiky amin'Andriamanitra. […] Ho tahaka ny rahona-kotrokorana manidina eny amin'ny habakabaka izy ireo amin'ny fofonaina kely iray an'ny Fanahy Masina. [...] Ho tena apôstôly amin'ny andro farany izy ireo izay homen'ny Tompon'ny tafika fahaiza-miteny sy hery hiasa zava-mahatalanjona ary hamabo ny babo be voninahitra avy amin'ny fahavalony […] [T] izy dia tena mpianatr'i Jesosy Kristy, maka tahaka ny fahantrany, ny fanetren-tenany, ny fanamavoana an'izao tontolo izao ary ny fitiavany. […] Hanana ny sabatra roa làlan'ny tenin'Andriamanitra ao am-bavany sy ny fenitry ny Hazo fijaliana misy ra izy ireo eo an-tsorony. Hitondra ny hazo fijaliana amin'ny tànany ankavanany izy ireo ary ny sapile amin'ny ankavanany ary ny anarana masin'i Jesosy sy Maria ao am-pony. Ny fahatsorana sy fahafoizan-tenan'i Jesosy dia ho hita taratra amin'ny fitondran-tenany manontolo. Toy izany ireo lehilahy lehibe ho avy. Araka ny sitra-pon'Andriamanitra, i Maria dia tokony hanomana azy ireo hanitatra ny fanapahany amin'ireo ratsy fanahy sy tsy mpino. Rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no hitrangan'izany? Andriamanitra irery no mahalala. Ho antsika dia tsy maintsy maniry mafy sy miandry izany mangina sy am-bavaka isika: “Niandry sy niandry aho.” ((St Louis-Marie Grignion de Montfort, bokiny mitondra ny lohateny, ch. 1, lah. 56-59))
Ny sora-tanana misy an'io sanganasa miavaka sy ara-paminaniana io dia nafenina nandritra ny zato taona mahery taorian'ny fahafatesan'i de Montfort, miaraka amin'ny fitenenana hoe "apôstôly amin'ny andro farany" nipoitra voalohany tao amin'ny asa soratr'i Mélanie Calvat, fahitana ny fisehoan'ny La Salette nankatoavina tamin'ny 19 septambra 1846, efa-taona taorian'ny nahitana ny sora-tanan'i St Louis-Marie tamin'ny 1842.
Rehefa miresaka an'i Mélanie Calvat dia tokony ekena fa mila mitandrina isika. Marina fa ny Eglizy katolika dia tsy nanaiky velively ny "tsiambaratelo" an'ny La Salette - izay isehoan'ny teny hoe "apôstôly amin'ny andro farany" - rehefa namoaka azy tany Lecce any Italia i 1878 1879, 30 taona mahery taorian'ny fiangonana. -Ny hetsika voamarina tamin'ny 1846. Raha tsy i Fr Michel Rodrigue ihany fa koa ireo mpikabary katolika fanta-daza matetika no mitanisa avy amin'ny tsiambaratelo toy ny hoe nekena tanteraka izany, noho izany dia takiana mazava ho azy ny karazana nuansa iray. Na ilay filozofa malaza Jacques Maritain aza, izay niady hevitra (tsy nahomby) fa manohana ny ara-bakiteny Ny maha-azo itokiana ny “tsiambaratelo” nataon'i Mélanie tamin'ny fihaonany manokana niaraka tamin'i Papa Benedict XV tamin'ny 1918, dia niaiky tamin'ny fiainany taty aoriana fa ny fandikana hafatra transendental ho amin'ny fitenin'olombelona dia raharaha sarotra sy mifono mistery izay tsy azo ihodivirana fa tafiditra ao anatin'ny fahaiza-misaina sy ny foto-kevitr'ilay mpandray.
Na izany aza, voalaza io, fa zavatra telo mifandraika amin'ny fiheverana ny hoe "apôstôly amin'ny andro farany" dia resaka zava-misy ara-tantara fa tsy tombantombana ara-teôlôjia momba ny halehiben'ny aingam-panahy tsy takatry ny saina nataon'i Mélanie Calvat. Voalohany, nanoratra tamin'ny 1876, Mélanie azo antoka nilaza fa ny Renin'ny Andriamanitra dia nanome azy torolàlana tamin'ny 1846 momba ny famoronana lamina ara-pivavahana vaovao antsoina hoe apôstôly amin'ny andro farany. Faharoa, tamin'ny mpijery manokana niaraka tamin'ny Papa Leo XIII tamin'ny 1878, ny Pontiff dia namporisika an'i Mélanie hanohy ny famoronana ny didy araka ny lalàna heverina fa nomen'i Maria Virjiny azy. Fahatelo, St Hannibal Mary di Francia (1851-1927) I St Hannibal dia tompon'andraikitra tamin'ny fanaparitahana ny asa soratr'ilay Mpanompon'Andriamanitra mystika italiana Luisa Piccarreta (1865-1947). Ny maha-kanônisialy azy tamin'ny taona 1994 no nanokatra ny lalana ho an'ny fanadihadiana vaovao momba ireo asa sorany feno volavolan-dalàna taorian'ny enim-polo taonan'ny Vatikana nametraka mangina momba azy ireo. dia nanampy an'i Mélanie tamin'ny fananganana ny lamandy Rogationista tany Sisila tamin'ny 1897 ary ny vehivavy mitovy aminy, ny Zanakavavin'ny zotom-po avy amin'ny fon'i Jesosy, iray amin'ireo tanjon'ny fiangonana dia ny miantso, amin'ny alàlan'ny vavaka, ireo apôstôly amin'ny andro farany.
REFERENENAN'NY "APOSTOLY AMIN'NY FARANY" NATAON'NY MISTERIKA NY DECADES farany
Raha miverina amin'ny vanim-potoana iainantsika isika dia zava-dehibe ny manamarika fa i Fr Michel Rodrigue dia lavitra fa tsy izy irery ihany no nolazaina fa mistika nampiasa io teny io tao anatin'ny folo taona lasa; farafahakeliny fito hafa dia azo fantarina fa avy tamin'i Jesosy sy / na ilay Virjiny tao amin'ny hafatra nampitainy.
Ny voalohany dia toa ny mistika italiana Giuliana Buttini Crescio (1921-2003), faribolan'ny manam-pahaizana saika tsy fantatra fa ny mpanoratra faty marobe hita eo amin'ny pejy sora-tanana 38 000 heverina ho toerana misy azy, miaraka amin'ny fitenenana Apostoli degli ultimi tempi nipoitra tamin'ny andian-kafatra voaray tamin'ny 1973 tamin'ny 1974.  http://www.amicidigiuliana.org/volume-i/messaggi-106-222Fantatra lavitra noho izany Don Stefano Gobbi, mpanorina ny Harian'ny Pretra Marian, izay nasain'ny Papa St John Paul II tsy tapaka hankalaza ny lamesa ao amin'ny trano fiangonana manokana an'ny Pontiff; ny teny dia hita tany am-boalohany tao amin'ny asa soratr'i Don Gobbi ny 1 Novambra 1981 tao amin'ny toerana iray nomena an'i Our Lady, niresaka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny MMP nivory tao Puebla any Mexico (n ° 236):
Amin'ny alàlan'ny vavakao, ny fijalianao ary ny fanoloran-tenanao manokana no hanatanterahako ny drafitro. Hataoko faingana ny fotoan'ny fandresen'ny Foko Malalaka ao amin'ny Fanjakan'i Jesosy, izay hanantona anao tamim-boninahitra. Amin'izay dia hanomboka vanim-potoana fandriam-pahalemana vaovao ary hahita lanitra vaovao sy tany vaovao ianao amin'ny farany. (…) Manana endrika tsara aho - aminao: valio amin'ny fahalalahan-tanana ny tsirairay! Amin'ity Cenacle miavaka ity dia azoko tamin'ny Ray tamin'ny alàlan'i Jesosy ny fanomezana ny Fanahy Masina ho anao. Hovainy ho 'apôstôly amin'ny andro farany' ianao.[...]
Na dia mbola mijanona ho olona mampiady hevitra aza i Mélanie Calvat, dia hazavana be no nanjavona tamin'ny fiainany sy ny vanim-potoana tato anatin'ny folo taona vitsivitsy taorian'ny nahitan'ny mpikaroka frantsay Michel Corteville ny taona 1999 ny fametrahana an-tsoratra ny "tsiambaratelo" an'i La Salette nataon'i Mélanie ary ilay mpahita namany Maximin Giraud tamin'ny taona 1851 ho an'ny Papa Pius IX. Ny rakitra ara-tantara mahaliana, ao anatin'izany ny lalàna naroson'i Mélanie momba ny filamin'ny Apôstôly amin'ny Andro Farany, dia hita ao amin'ny boky Découverte du secret de La Salette avy amin'i Corteville sy René Laurentin (Paris: Fayard, 2002). Fanandramana farany nataon'i Paul-Etienne Pierrecourt tao amin'ilay boky De la Salette à Diana Vaughan (Fanontana Rémi, 2020) hanaratsiana ny sanganasan'i Corteville dia toa nahazo vahana tamin'ny faribolana nentin-drazana frantsay, saingy tafiditra kokoa amin'ny karazana teoria fikomiana fa tsy ny vatsim-pianarana matotra (i Pierrecourt dia resy lahatra ohatra fa i "Diana Vaughan", notazomina malaza nataon'ny fiangonana tamin'ny faran'ny taona 19th taonjato lasa toy ny mpamadika loka avy amin'ny Freemasonry, tena nisy, nefa efa ela no fantatra fa izy dia noforonin'ny mpanoratra Léo Taxil).
Nisy hafatra (n ° 533) voaray tamin'ny 8 Desambra 1994, Fetin'ny fananahana tsy manan-tsiny, Don Gobbi ao Santiago ao amin'ny Repoblika Dominikanina manaitaitra ny fomba fihevitr'ireo "apôstôly" ireo:
Amin'ity andro ity indrindra dia mankalaza ny faha-dimampolo taonan'ny nanombohan'ny fitoriana filazantsara an'ity kontinanta amerikanina rehetra ity ianao. Taorian'ny roa arivo taona lasa izay taorian'ny nanambarana voalohany ny filazantsara dia lasa mpanompo sampy indray ny zanak'olombelona. Izaho no renin'ny fitoriana filazantsara faharoa. Ny ahy dia ny asa fananganana ireo apôstôlin'ny filazantsara faharoa. Nandritra izay taona maro izay dia noforoniko tamim-pitandremana manokana ianao tamin'ny alàlan'ny fanomezam-pahasoavana ny teniko mba ho apôstôlin'ity andro farany ity. Apôstôly amin'ny andro farany, satria tsy maintsy ambaranao amin'ny rehetra, hatramin'ny faran'ny tany, ny Filazantsaran'i Jesosy, amin'izao andro fivadiham-pinoana lehibe izao. Ao amin'ny haizina lehibe nidina tamin'izao tontolo izao dia aparitaho ny fahazavan'i Kristy sy ny fahamarinany masina. Apôstôly amin'ny andro farany, satria tsy maintsy omenao ny fiainana rehetra Andriamanitra, amin'ny alàlan'ny fahasoavana izay ifandraisanao amin'ny sakramenta izay anaovanao ny fanompoana. Ary dia toy izany no nanaparitanao ny fofon'ny fahadiovana sy ny fahamasinana amin'izao fotoanan'ny fanodikodinana lehibe izao. Apôstôly amin'ny andro farany, satria nantsoina ianao handatsaka ny andon'ny fitiavan'i Jesosy mamindra fo eran'izao tontolo izao tototry ny tsy fahaizana mitia sy mandrahona hatrany amin'ny fankahalana, herisetra ary ady. Apôstôly amin'ny andro farany, satria tsy maintsy ambaranao ny fiverenan'i Jesosy manakaiky tamim-boninahitra, izay hitarika ny olombelona hiditra amin'ny vanim-potoana vaovao, izay ahitanao lanitra vaovao sy tany vaovao. Ambarao ny fiverenany ho avy: 'Maranatha! Avia, Jesosy Tompo! '
Ho an'izay mahalala ny lohahevitra nantitranterin'i Fr Michel Rodrigue tamin'ny famelabelarany dia tokony ho hita miharihary ny fitohizan'ny hafatr'i Don Gobbi. Toy izany koa ny fanao mistika dimy farafaharatsiny izay nampiasa ny teny hoe "apôstôly amin'ny andro farany":
- Luz Amparo Cuevas (1986), mpahita ny fisehoan'ny El Escorial akaikin'ny Madrid any Espana izay, na dia tsy eken'ny Eglizy ara-dalàna aza ny fisehoana dia omena lalana ny fanompoana ampahibemaso.
- Agustín del Divino Corazón (Kolombia), mpiara-manorina ny fiangonana nahazo fankatoavana an'ny Mpanompo ny Fanarenana ny fo masina, izay nahazo ny soratra Imprimatur avy amin'ny diosezin'i Lurin, ary izay nanoratra boky iray momba ny toerana voalaza fa "Mary, mpampianatra ny Apôstôly amin'ny Andro Farany". Nilaza an-tsoratra i Agustín fa nilaza izy fa "henony" (amin'ny hevitry ny toerana misy azy) voalohany ny teny hoe "apôstôly amin'ny andro farany", dia nokasihin'izy ireo ho fahatsiarovana ny vanim-potoana New Age, angamba noho izy tsy nahalala ny Fomban-drazana katolika ortodoksa manohana ny hevitra.
- Luz de Maria de Bonilla (Costa Rica, monina any Arzantina), Augustinian Tertiary, izay ny asa sorany teo anelanelan'ny 2009 sy 2019 dia nahazo ny Imprimatur avy amin'ny Eveka Juan Abelardo Mata Guevara avy any Esteril, ary asongadin'ity tranonkala ity.
- Sulema (El Salvador, monina ao Quebec), mpanoratra ny toerana misy boky telo navoakan'ny manam-pahaizana soisa momba ny fanambarana tsy miankina Editions Parvis, nosoratana / notsongaina taminy tamin'ny teny frantsay haisoratra kanto, fiteny iray izay Sulema, fiteny Hispanophone miteny voalohany, dia miteny amin'ny ambaratonga voalohany. Mahaliana fa ny firesahana voalohany an'ireo “apôstôly amin'ny andro farany” (24 Aogositra 2012) dia mamerina maneho hevitra marimarina avy amin'ny hafatr'i Don Gobbi n ° 533, fa amin'ny endrika mandroso kokoa izay tsy milaza ny fomban'ny piraty.
- fahitana fahitana ortodoksa grika Vassula Rydén tamin'ny hafatra tamin'ny 1996 tao amin'ilay boky Ny tena fiainana ao amin'Andriamanitra, iharan'ny Vatican Notification tamin'ny 1995 fa nanome ny Nihil Obstat ary Imprimatur tamin'ny taona 2005 taorian'ny fanazavana ny hevitra momba ny fifandirana teolojika nandritra ny fifanakalozan-kevitry ny tsirairay teo amin'i Vassula sy i Kardinaly Ratzinger ao amin'ny fiangonana ho an'ny fotopampianaran'ny finoana.
"APOSTOLY FARANY" NAOTAIN'NY AUTO-FAUTGGIONION?
Ny fomba ilazalazana ireo “apôstôly amin'ny andro farany” dia mifanaraka tanteraka amin'ireo hafatra lazaina fa rehetra ireo, na dia eo aza ny zava-misy fa ny mistisianina voakasik'izany, toa an-dry Fr Michel Rodrigue, dia tsy dia nanana hevitra firy momba ny votoatin'ny fanambarana nataon'ny tsirairay. . Ahoana no hanazavantsika izany fampitambarana izany? Azo atao ve izany, raha ny fahalalany manokana ny fomban-drazana mistika, dia hitan'i Fr Michel ho toy ny "apôstôly amin'ny andro farany" izy ary namoaka ny fanambarana nataony tamin'ny sosokevitra automatique noho ny rafitra fahatanterahan'ny faniriana tsy mahatsiaro tena mifandraika amin'ny ara-panahy. olo-malaza ankafiziny? Amin'ny endrika somary hafa kely dia afaka mahita rafitra mitovy amin'izany isika amin'ny fiezahan'ny vondrona schismatic sasany, toy ny SSPX sy Arseveka Lefebvre mivantana amin'ny fisehoan'ny Marian (indrindra ireo an'ny Quito, Ecuardor an'i Neny Mariana de Jesus Torres (1563-1635), mahita ny tenany ho mpanatanteraka ny faminaniana mifandraika amin'ny fisehoana resahina. Ataovy somary maloto, manandrana fotsiny ve izy lasa Don Gobbi iray hafa ary mamorona ireo fitaovana ilaina ho an'ny anjara asa tsy araka ny eritreriny ara-pinoana? Mazava ho azy fa mekanika azo inoana ara-psikolojika izay mety haharesy ny mpahita notendren'ny tena (tsy miantso anarana…) amin'izao fotoana izao amin'ny Internet, saingy tsy misy antony mahatonga an'io dia tsy maintsy marina amin'ny raharaha Fr Rodrigue. Ny fanontaniana lojika araka izany dia toa izao: ahoana no hitsarantsika raha tafiditra ao anaty fandriky ny delestazy izy sa manana fanandramana mystika tena izy?
Ny valiny iray (vonjimaika) dia toa mandainga amin'ny fiezahana hamantatra ireo singa ao aminy tsy afaka hazavain'ny fihenan'ny saina. Ny singa iray toy izany dia azo inoana fa ny fisehoana miaraka amin'ireo fanambarana voalaza fa mitovy amin'ny loharanom-pahalalana izay mazava ho azy fa tsy mifandray, indrindra rehefa tsy azo zohina ho loharano iraisana ao amin'ny soratra masina na lovantsofina ireo fanambarana ireo.
Ohatra iray amin'izany ny hafatra ho an'i Gisella Cardia ao amin'ny Trevignano Romano tamin'ny 18 Aogositra 2020 https://www.lareginadelrosario.com/2020/08/messsaggi-agosto-2020.html Fandikana anglisy: https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-cardia-do-not-be-far-from-god - miantso ny mpino hanomana tahirin-tsakafo mandritra ny 3 volana, ny faharetan'ny fotoana nolazain'i Fr Michel amin'ny kaontinanta hafa sy amin'ny fiteny hafa. Raha jerena fa niseho ity hafatra ity tany Italia volana maro taorian'ny nanaovan'i Fr Michel antso fitarainana mitovy amin'izany, raha ny plagiarism no fanazavana momba ny firaisana, dia lozika ilay fahitana italianina izay ho ahiahiana. Na izany aza, ao Trevignano Romano, ny toerana hitan'ny mpahita dia tohanan'ny fisehoan-javatra maro tsy voamarina ara-tsiansa voarakitra an-tsary ao anatin'izany ny “Dance of the Sun” ao amin'ny tranokala fisehoana, amin'ny fotokevitra tsy azo atao sandoka; ity dia toa mampihena ny mety hisian'ny plagiarism amin'ny lafiny Gisella Cardia. Ity ohatra manokana ny fiarahan-dresaka ity (ary misy maro hafa) noho izany dia mijanona ho enigma tsy voavaha: raha esorina ny fanaovana kopia ho fanazavana, dia omena kisendrasendra fotsiny isika na iombonana aingam-panahy mihoatra ny natiora ho toy ny safidy hafa izay tokony hotsarain'ny mpamaky.
Fitsipika iray tanjona faharoa mazava ho azy fa mahaliana ny fahatanterahana (na ny tsy fisian'izany) ireo faminaniana isan-karazany nataon'i Fr Michel Rodrigue, indrindra ireo izay niresahany daty manokana, ny fararano 2020 no ohatra miharihary. Io dia ekena fa tena sahisahy tokoa - na mety hadalana - avy aminy, toa tsy tonga saina ireo fisehoan-javatra voalaza mialoha dia hampiharihary azy ho tsy azo atokisana ho feo ara-paminaniana (raha tsy misy porofo azo itokisana fa voaroaka ny fisehoan-javatra. amin'ny vavaka iarahana amin'ny ambaratonga lehibe).  Tokony hotadidina anefa izany rehetra Ny faminaniana mifandraika amin'ny toe-javatra misy ny fahalalahan'ny olombelona misafidy dia voafaritra mazava. Na izany aza, ho an'ireo izay nanaraka ny teniny nandritra ny fotoana lava rehetra, ny fanambarana miankina amin'ny fotoana napetrany taloha - indrindra ny faminaniana tamin'ny faran'ny taona lasa fa ny Noely 2019 no farany amin'ny toe-javatra mahazatra, ary hitombo haingana ny zava-mitranga eran-tany aorian'ny 25 Desambra, voaporofo fa marina tanteraka. Ny fiverenan'ny covid-19 taorian'ny fialan-tsasatry ny fahavaratra dia mifanitsy akaiky amin'ny faminaniana nataon'i Fr Rodrigue volana maro lasa izay. Ny fotoana ihany no hahafantarana raha tokony ho raisina ho “hits-kisendrasendra” fotsiny ireo, vokatry ny faminavina an-tsokosoko, na ny vokatry ny aingam-panahy avy amin'ny herin'ny voajanahary, saingy raha jerena ny fizotry ny fotoana noresahin'i Fr Michel, dia hilaza amintsika ireo zavatra farafaharatsiny mba ho ela kokoa fa tsy taty aoriana . Paikady iray mety ho an'ireo mpamaky tsy azo antoka ny fomba fanombanana ny teniny noho izany dia ny fampiatoana ny didim-pitsarana amin'izao fotoana izao, ary miverina any aminy izy ireo amin'ny fiandohan'ny taona 2021 rehefa tokony hazava kokoa ny raharaha.
Ny taratasin'i Eveka Bourgon momba an'i Fr Michel dia namarana tamin'ny teny hoe "Mivavaka aho ho an'ireo mpino rehetra izay mety niaina fotoam-pahoriana manoloana ireo teny sy famelabelaran'i Mompera Rodrigue ireo." Mazava ho azy fa azo takarina ny vavaka toy izany, ary tokony holazaina amin'ny ambaratonga pastoraly, saingy fanontaniana roa no farafaharatsiny.
Voalohany, tokony hanontaniana raha ny fijaliana dia vokatry ny serasera Fr Michel na raha toa ity farany dia nitazona fahatsapana ho an'ny olona efa marefo izay ny famakiana fanambarana manokana dia farafaharatsiny noho ny tsy fahatokisan-tena na tahotra misy amin'ny ho avy. Indrindra indrindra fa izy sy ireo mpahita maro hafa amin'ny "marimaritra iraisana ara-paminaniana iraisampirenena" dia nampahatsiahy antsika hatrany fa, amin'ny teny ao amin'ny Salamo 91, Andriamanitra no "fialofana sy fiarovana ho antsika".
Faharoa, atahorana hirongatra ny feo, izay mitarika fanahiana bebe kokoa: ny fampisehoana eschatolojika an'i Fr Michel Rodrigue na ny zava-misy tsy ampoizina atrehan'ny olona an'arivony tapitrisa manerantany, indrindra ny ivelan'ny firenena indostrialy? Zava-misy marihina amin'ny "fitarainan'ny mahantra" sy ny "fitarainan'ny tany", amin'ny alàlan'ny herisetra miharo karazan-karazany isan-karazany, ny fitomboan'ny totalista, ny fanenjehana ara-pinoana amin'ny ambaratonga lehibe, ny fahasimban'ny fianakaviana, ny tsy fitoviana eo amin'ny samy hafa, ny famindran-toerana lehibe an'ny mponina ary ny loza voajanahary , miharatsy hatrany hatrany izy rehetra nefa tsy misy famantarana mazava ny fanatsarana ny faravodilanitra.
Ny mahatsikaiky dia toa izao: farany, araka ny filazan'ny tenin'i Don Stefano Gobbi n ° 533 tamintsika, dia manohitra an'io toe-javatra manjombona io ny fiantsoan'ny "Apôstôly amin'ny Andro Farany" (fiantsoana misokatra ho an'ny rehetra izay misafidy izany) dia iraky ny fanantenana sy ny fanasitranana, “nantsoina mba hampidina ny ando avy amin'ny fitiavana be famindram-pon'i Jesosy ho an'izao tontolo izao niha-maina noho ny tsy fahaizana mitia sy hampitahorina amin'ny fankahalana sy herisetra ary ady. Ny andraikitry ny apôstôly dia ny “ambarao ny fiverenan'i Jesosy akaiky eo amin'ny voninahitra, izay hitarika ny zanak'olombelona ho amin'ny fotoana vaovao, izay amin'ny farany dia ho hita ny lanitra vaovao sy tany vaovao. " Raha ny fahitako azy dia io indrindra no tadiavin'ny tian'i Fr Michel Rodrigue hatao, ny fetran'ny olombelona rehetra na eo aza izany. Ny tanjon'izy ireo dia ny tsy hiteraka alahelo fa hanome aingam-panahy ny finoana miorina amin'ny Baiboly amin'ny fampanantenan'Andriamanitra momba ny Famoronana nataony. Fa ny fihainoana ireo mpaminanin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao dia mitaky ezaka sy fifehezana ara-panahy avy amin'ilay mpihaino, izay ny fiahiany voalohany indrindra dia ny hafatra lehibe fa tsy ny antsipiriany mandritra ny fotoana fohy, na dia manaitra aza izy ireo. Ary io hafatra io amin'ny farany dia tsy inona fa ny famongorana ny tantaran'ny famonjena momba ny famonjena. Tsy azontsika antoka amin'izao fotoana izao raha hanamarina i Fr Michel amin'ny maha-mpaminany marina azy na hiditra amin'ny laharan'ny olona tsara sitra-po nefa diso lalana nandritra ny tantaran'ny Kristiana izay nampisavoritaka ny aingam-panahy tena izy tamin'ny fiasan'ny eritreriny ara-pinoana manokana. Saingy ny valiny mety dia tsy ny teniny ihany fa ny fikorontanana miharihary amin'izao androntsika izao dia ny tsy mitady fitsoahana an'izao tontolo izao na fiarovana ny tenanao na inona na inona vidiny, fa ny fanarahana ny tolo-kevitry ny Tompontsika mihitsy, eo am-pahatsiarovantsika mandrakariva ny fotoanan'ny Lanitra. tsy antsika izany:
Mitsangàna, atsangano ny lohanao, fa manakaiky ny fanavotana anao. ” (Lioka 21: 28)
19 septambra 2020 (tsingerintaona nahitana ny vadin'ny vadin'i Mélanie Calvat sy Maximin Giraud tao La Salette, 19 septambra 1846)
Tsindrio eto raha hampidina an'ity lahatsoratra ity ho PDF.
1. ↑ http://www.diocese-amos.org/sn_uploads/fck/FABL/2020-09-03-Open-letter-from-Bishop Gilles-Lemay-about-Father-Michel-Rodrigue.pdf
2. ↑ http://hearstdiocese.com/diocese/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-9-Letter-to-the faithful-from-Bishop-Bourgon.pdf
3. ↑ I St Hannibal dia tompon'andraikitra tamin'ny fanaparitahana ny asa soratr'ilay Mpanompon'Andriamanitra mystika italiana Luisa Piccarreta (1865-1947). Ny maha-kanônisialy azy tamin'ny taona 1994 no nanokatra ny lalana ho an'ny fanadihadiana vaovao momba ireo asa sorany feno volavolan-dalàna taorian'ny enim-polo taonan'ny Vatikana nametraka mangina momba azy ireo.
4. ↑ http://www.amicidigiuliana.org/volume-i/messaggi-106-222
5. ↑ Amin'ny endrika somary hafa kely dia afaka mahita rafitra mitovy amin'izany isika amin'ny fiezahan'ny vondrona schismatic sasany, toy ny SSPX sy Arseveka Lefebvre mivantana amin'ny fisehoan'ny Marian (indrindra ireo an'ny Quito, Ecuardor an'i Neny Mariana de Jesus Torres (1563-1635), mahita ny tenany ho mpanatanteraka ny faminaniana mifandraika amin'ny fisehoana resahina.
6. ↑ https://www.lareginadelrosario.com/2020/08/messsaggi-agosto-2020.html Fandikana anglisy: https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-cardia-do-not-be-far-from-god
7. ↑ Tokony hotadidina anefa izany rehetra Ny faminaniana mifandraika amin'ny toe-javatra misy ny fahalalahan'ny olombelona misafidy dia voafaritra mazava.
← Fanahy Kalifornia - Ny zava-drehetra…